Imibuzo Yokuxoxa - Izimpendulo | I-Cyber-Security Professionals | ITS
Imibuzo Yokuxoxa - Izimpendulo Zabaqeqeshi be-Cyber-Security
Izinto ezintsha zithuthuka masinyane, futhi izingozi zokuphepha kwi-intanethi zivuleka ukuze zibe nzima kakhulu ukubona. Ukuze ama-aggregates anamuhla asebenze, indlela yokujwayelekile yokuxazulula izingozi ayisoze yaphoqelela. Ngenxa yalokho, ochwepheshe bezokuphepha kwe-cyber bancike ekuthuthukiseni amakhono abo ngokuzenzakalelayo njengoba isimo sezokuphepha sishintsha. Banikeza ukwelulekwa nokusekelwa okukhethekile ukusiza amakhasimende ukuba athuthukise umsebenzi wabo wezokuphepha nezingozi. Nazi imibuzo embalwa kubo:
Imibuzo yokuphendula imibuzo ye-20 nezimpendulo ze-Cyber-Security Professionals
Yini onayo ohlelweni lwakho lwekhaya?
Kuyini "umjovo we-SQL"?
Kuyini uxhumano lwe-SSL neseshini ye-SSL?
Ziyini izindlela ezintathu zokuqinisekisa indoda?
Izinqubo ezehlukene ekuvivinyweni kokuphepha?
Iyiphi insizakalo ye-web server?
Iyini i-Traceroute noma i-tracert?
Ukuphepha kweseva ye-Linux: Izigaba ezintathu zokuvikela zonke izinhlelo
Kuyini salting futhi yini esetshenziselwa?
Ingxenye esetshenzisiwe njengengxenye ye-SSL?
Kuyini ukuphazamiseka kwe-WEP?
Amapharamitha afaka isimo seseshini ye-SSL?
Ungakuvikela kanjani ikhaya lakho le-Wireless Access Point yakho?
Yiziphi izici zokuhlolwa kokuphepha?
Kuyini ukuskena kwe-port?
Isistimu Yokuthola Inethiwekhi Yokungena Kwe-Intrusion (NDIS)?
I-PC ephathekayo ye-Windows enokushintshashintsha okungaxhunyiwe kude, ucingo ngangokunokwenzeka kuze kube yizikhungo zokusebenza zakwa-14 Linux, i-Active Directory Domain Controller, i-Firewall apparatus kanye ne-toaster ehlanganiswe net.
Iyiphi iphrojekthi ohlangene nawe ongathi uyathokoza kakhulu?
Kungakhathaliseki ukuthi iphrojekthi yakho ingumuntu owodwa njengesikhangiso sokuqala uma ulungisa i-console ye-amusements noma uhlanganise i-PC yakho yokuqala noma ebaluleke njengokuqamba uhlelo, injongo yalo mbuzo ukukhombisa intshiseko yakho. Lokhu kwakufundiswe phakathi kokuphepha kwe-cyber okulungiselelwe.
Kungenye yezindlela zokuhlaselwa ezivamile ezisetshenziswe ngabahleli ukuthola idatha eyisisekelo. Abahleli bahlola noma yikuphi ukuvulwa kwe-loop esakhiweni abangayidlulisela ngayo imibuzo ye-SQL, ehlukana nokuhlola kokuphepha futhi ibuyise idatha eyisisekelo.
Ukuxhumeka kwe-SSL yisixhumanisi esibonakalayo esinezincwadi zokuhambisa lapho uxhumano ngalunye luhlobene khona ne-SSL Session eyodwa. Lesi sigaba singabonakala njengobudlelwane phakathi kwamakhasimende nesiphakeli, ngokukhululekile okukhishwe ngokubamba ngesandla.
Okuthile abanakho (isibonakaliso), Okuthile abakwaziyo (ukhiye wangasese) nokunye okuyikho (i-biometrics). Lokhu kuqinisekisa isikhathi esithile sisebenzisa igama eliyimfihlo nokusetha ithokheni, naphezu kokuthi ngezinye izikhathi kungaba iPIN kanye nesithupha.
I-White Box-Yonke idatha inikezwa kubahlaziyi, ibhokisi elimnyama-Ayikho idatha enikelwa abahlaziyi futhi bangakwazi ukuhlola uhlelo esimweni esiqinisekisiwe, ibhokisi elimhlophe-idatha ehlukile inebahlaziyi kanye nokuphumula okudingayo ukubeka bonke.
Ukukhubazeka okuvamile ukuthi iseva yewebhu ingaxhaphaza yilokhu: Ukuguqulwa kwamagama, izilungiselelo ezizenzakalelayo, ama-Bugs ohlelweni lokusebenza kanye namaseva wewebhu.
Ivumela ukuthi uhlole ukuthi ukuphazamiseka okuxhunyiwe kwenzeke ngokukubonisa ulayini olulungile lokuxhuma kusuka ekushintsheni ukuze ushintshele ekugcineni.
Izigaba ezintathu zokuvikela zonke izinhlelo: Ukucwaninga, Ukuzikhandla, Ukuthobela.
Umbuzo wakho ukhuluma ngegama eliyimfihlo salting kodwa lizama ukukubamba ngokusebenzisa ingxenye enkulu yesikhathi. Kuyindlela eqinisekisiwe yokubethela kwamaphasiwedi futhi kuyodingeka ukuthi ufunde futhi uyithole isikhathi.
I-SSL isetshenziselwa ukuxhumana okuphephile phakathi kwama-PC namakhasimende. Ukuthatha emva kwesigaba esisetshenzisiwe njengengxenye ye-SSL: Ukubamba ngesandla ngesandla, Ukubala kokubethela, i-SSL protocol eqoshiwe, i-Change Cipher Spec.
Ukuphahlazeka kwe-WEP kuyindlela yokusebenzisa ukukhubazeka kokuvikeleka kumasistimu akude futhi ukwandise ukungena okungavunyelwe.
Imingcele ekhombisa isimo seseshini ye-SSL yilezi: Isihlonzi seSession, Isu lokucindezela, Ukuqinisekiswa koontanga, Imfihlakalo ye-Master, i-Cipher spec.
Kukhona izindlela zokubhekana nokuvikeleka kwe-Wireless Access Point: ukusakaza i-SSID, ukusebenzisa i-WPA2 nokusebenzisa ukuhlunga ikheli le-MAC yizona eziyinhloko phakathi kwazo.
Kulandela izici eziyisikhombisa zokuhlolwa kwezokuphepha: Ukuqinisekisa, Ukugcinwa Kwamfihlo, Ukugunyazwa, Ubuqotho, Ukutholakala, Okungekho Disavowal, Ukuvuselela.
Amachweba ayiyona iphuzu lapho idatha ihamba khona kunoma yisiphi isistimu. Ukuskena kwamapayipi ukuthola noma yikuphi ukuvuleka kwe-loop ohlelweni kuthiwa yi-Port Scanning.
Isistimu esetshenziselwa ukukhohlisa abantu ngemininingwane ngokulingisa othembekile kwisayithi elihle njengo-Facebook noma i-Hotmail, ukudweba iklayenti ukungenisa irekhodi labo kanye nedatha yokukhiya eyimfihlo. Ochwepheshe bafundiswa ukuthi bangenza kanjani amakhasimende aqaphele lokhu phakathi kwesigaba sokufundisa ngezokuphepha kwe-cyber.
Isetshenziselwa ukuqedela ukuhlolwa komsebenzi odlulayo kwi-sub-net futhi ngokungeziwe ukuwufanisa nokuhlaselwa okuwaziwayo. Uma kwenzeka ukuthi noma yikuphi igebe loop eqaphela khona umqondisi uthola isixwayiso.
Izinhlelo ezisetshenziselwa ukulindela ukuhlasela kwe-web server?
Ukulungiswa kokuPhatha, ukufakwa okuphephile nokucushwa kwesofthiwe ye-web server, ukukhishwa kwe-akhawunti engasetshenzisiwe nokuzenzakalelayo, inhlangano edelekile yokukhubazeka, njalonjalo.
Uhlelo lwe-HIDS noma le-Host Intrusion Detection System olulodwa lapho ukubonakaliswa kwesistimu yamanje kuthathwa futhi kuyinkimbinkimbi ekuqalisweni kwangaphambili. Ihlola uma amadokhumenti ayisisekelo ashintshiwe noma asuliwe bese i-alamu ithunyelwa kumlawuli.
Isitifiketi Esincane - Imibuzo Yokuxoxa Nezimpendulo